गंगामायाले राष्ट्रसंघ, जेनेभा र लण्डन जान राहदानी बनाइन् - गंगामायाले राष्ट्रसंघ, जेनेभा र लण्डन जान राहदानी बनाइन्
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १९ पुष, 07:17:58 PM
छोरा कृष्ण अधिकारीलाई माओवादीले हत्या गरेकोबारे सम्पूर्ण विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउने कदम !
काठमाडौं । माओवादीले २०६१ सालमा चितवनमा हत्या गरेको आफ्नो किशोर छोरा कृष्ण अधिकारीका लागि न्याय माग्न ४ पटक आमरण अनसन बसेकी आमा गंगामाया अधिकारीले जेनेभा, बेलायत र राष्ट्रसंघ मूख्यालय न्युयोर्क जान नयाँ वर्षकै दिन पुस १७ गते काठमाडौँबाट पासपोर्ट बनाइन् । यो जघन्य अपराध र अन्यायबारे उनले ती स्थानमा सबै विवरण बोल्ने भएकी छन् । यो ज्यानमारा मुद्दामा पूर्व माओवादीका १३ जना कार्यकर्ताहरू उपर किटानी जाहेरी परेको छ । यो मुद्दा चलाउन सरकारले आलटाल गरिरहेकामा गंगामायाको आपत्ती छ ।
माओवादीबाट हत्या गरिएका स्व.कृष्णप्रसाद अधिकारी
मानवताविरोधी अपराधका रुपमा राष्ट्रसंघ लगायतका त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तरगत यो मुद्दा उठाए भने पूर्वमाओवादीका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत विदेश जाँदा पक्राउ पर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पीडितको किटानी बयान र जाहेरीका आधारमा संसारका कुनैपनि मुलुकले त्यस्ता अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सक्छ ।
उनका वकिलका अनुसार अहिले नै भ्रमणको कार्यक्रम त बनिसकेको छैन । तर थाहा भए अनुसार ‘उतै’ बाट बोलाइए अनुसार गंगामायाको यो भ्रमण गोप्यरुपमा तय भएको हो । गंगामायाका साथ चर्चित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि जाने सम्भावना छ । गंगामायाले आफ्नो छोराको हत्या भएकोबारे सम्पूर्ण बृत्तान्त राष्ट्रसंघ मूख्यालय, मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायोग जेनेभा र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लण्डनमा प्रस्तुत गर्नेछिन् । बेलायतमा उनको अतिरिक्त प्रयास, नेपालबाट फरार भएर त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका गोली हान्ने खास मान्छे रुद्रप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरी न्यायको कठघरामा ल्याउनु हुने छ ।
मानवताविरोधी अपराधका रुपमा राष्ट्रसंघ लगायतका त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तरगत यो मुद्दा उठाए भने पूर्वमाओवादीका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत विदेश जाँदा पक्राउ पर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । पीडितको किटानी बयान र जाहेरीका आधारमा संसारका कुनैपनि मुलुकले त्यस्ता अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सक्छ । न्याय माग्न आमरण अनशन बस्दाबस्दै ३३४ औँ दिनमा कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसादको निधन भइसकेको छ । उनको पार्थिव शरीरको हालसम्म दाहसंस्कार नगरी वीर अस्पतालको मर्चरी (लाशघर) मा राखिएको छ । पीडकलाई सजाय नमिलेसम्म उनको लाशको दाह संस्कार नगर्ने अडानमा परिवारजन रहेका छन् । नन्दप्रसादले मर्ने बेलामा यही इच्छा व्यक्त गरेको दावी परिवारजनको छ ।
गंगामायाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अन्याय पीडित भएको आवाज उठाइन् भने नेपाल मानव अधिकार हनन्, अन्याय तथा दण्डहिनताको मुलुकका रुपमा चिनिने छ । त्यसले नेपालभित्र प्रचण्ड दबाब पर्नसक्ने सम्भावना छ । मानव अधिकारको आवाज उठाउनुलाई बाह्य हस्तक्षेप नमानिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूको प्रावधान छ ।
हत्याको अभियोगमा किटानी जाहेरीमा परेका रुद्रप्रसाद बाहेक अन्य अभियुक्तहरूमा वर्ष ५५ को छविलाल पौडेल, हिसिला यमीकी सहयोगी रहेकी जानुका पौडेल, वर्ष ५७ को मेघनाथ पौडेल, वर्ष ४० को विष्णु तिवारी, वर्ष ४८ की सुभद्रा तिवारी, वर्ष ३० की सीता अधिकारी, वर्ष ५० को कालीप्रसाद अधिकारी, वर्ष ३४ को हिमाल अधिकारी, वर्ष २७ को रामप्रसाद अधिकारी (कालीप्रसादको छोरा), वर्ष ३० को अर्को रामप्रसाद अधिकारी, वर्ष ३० को भीमसेन पौडेल, वर्ष ३५ को ‘अजीव’ पनि भनिने परशुराम पौडेल छन् । तर चितवन जिल्ला अदालतले १२ जना अभियुक्तहरूलाई सफाई दिइसकेको छ । सफाई दिलाउने दबाबका लागि ठूलो संख्यामा माओवादी कार्यकर्ताहरू चितवन अदालतको परिसरमा पुगेका थिए ।
गंगामायाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अन्याय पीडित भएको आवाज उठाइन् भने नेपाल मानवअधिकार हनन्, अन्याय तथा दण्डहिनताको मुलुकका रुपमा चिनिने छ । त्यसले नेपालभित्र प्रचण्ड दबाब पर्नसक्ने सम्भावना छ । मानव अधिकारको आवाज उठाउनुलाई बाह्य हस्तक्षेप नमानिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूको प्रावधान छ ।
२०७५, १९ पुष, 07:17:58 PM